Esanda kukhishwa yi-CDC: Usongo lwezempilo lwaseMelika
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Impilo » Esanda kukhishwa yi-CDC: Usongo lwezempilo lwaseMelika
Ngokwesifunda, iNingizimu yayinezinga eliphezulu kakhulu lokunganyakazi umzimba (27.5%), kulandele iMidwest (25.2%), iNyakatho-mpumalanga (24.7%), kanye neNtshonalanga (21.0%).
Bangaphezu koyedwa kwabahlanu abantu abadala abangasebenzi kuzo zonke izifundazwe ezine zase-US, ngokusho kwamamephu ezwe amasha wokungawuvivinyi umzimba kwabantu abadala akhishwe Amasevisi Okulawula Nokuvimbela Izifo (CDC).
Kulawa mamephu, ukungasebenzi komzimba kwabantu abadala kuchazwa njengokungahlanganyeli kunoma yimiphi imisebenzi yomzimba ngaphandle komsebenzi enyangeni edlule - imisebenzi efana nokugijima, ukuhamba ngezinyawo ukuze uzivocavoce, noma ukulima ingadi.
Izilinganiso zezinga lesifunda nendawo zokungasebenzi komzimba zisukela ku-17.7% wabantu e-Colorado ukuya ku-49.4% E-Puerto Rico. Ezifundeni eziyisikhombisa nasendaweni eyodwa (Alabama, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Oklahoma, West Virginia, nasePuerto Rico), u-30% noma ngaphezulu wabantu abadala bebengasebenzi ngokomzimba. Ngokwesifunda, iNingizimu yayinezinga eliphezulu kakhulu lokunganyakazi umzimba (27.5%), kulandele iMidwest (25.2%), iNyakatho-mpumalanga (24.7%), kanye neNtshonalanga (21.0%).
"Ukuzivocavoca umzimba okwanele kungavimbela ukufa kwe-1 ku-10 ngaphambi kwesikhathi," kusho uRuth Petersen, MD, uMqondisi we CDC's Division of Nutrition, Physical Activity, and Obesity. “Baningi kakhulu abantu abaphuthelwa yizinzuzo ezingokwempilo zokuzivivinya umzimba njengokulala kahle, ukunciphisa umfutho wegazi nokukhathazeka, ukunciphisa ingozi yesifo senhliziyo, imidlavuza eminingi, nokuwohloka komqondo (kuhlanganise nesifo i-Alzheimer).
Amamephu amasha asekelwe kudatha ehlanganisiwe yango-2017-2020 evela ku-Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS), inhlolovo yengxoxo yocingo eqhubekayo yombuso eyenziwe yi-CDC kanye neminyango yezempilo yezwe. Kuyaqala ngqa lokho CDC idale amamephu esifunda okungasebenzi komzimba kwabantu abadala okungewona ama-Hispanic American Indian/Alaskan Native kanye nabangewona ama-Hispanic Asian.
Ikhasinkomba 1 of 2 Okwangaphambilini	Olandelayo
CDC Centers for Disease Control and Prevention Colorado Guam Hispanic E-Puerto Rico
Amazwe amane enza ngokusemthethweni “Umgwaqo Omkhulu Wasolwandle” eziQhingini zaseGalapagos
I-Russia izovimbela ukuthengiswa, ukumba izimayini kanye nokusatshalaliswa kwama-cryptocurrencies
Isicelo esisha sezidakamizwa seziguli ezine-Follicular...
Impilo Entsha Iphefumulelwe Ekubuyeni Kombukiso Wokuvakasha WamaRoma
I-MTV Push Live: I-PortAventura World kanye ne-Paramount Spain...
Kulindelwe Imisebenzi Emisha Eyizigidi Ezingu-126 Kwezokuvakasha Nezokuvakasha...
I-Skal New Orleans Inyusa u-$5,000 kubabaleki base-Ukraine
Ukuncipha kwezinyosi zoju kungasho izitshalo zezithelo ezincane
Imithelela Ehlala njalo ye-COVID ende
Izindawo Ezintsha Zokuya Nezihlalo Eziningi Zitholakala...
Ngisho nebhayisikili lakho lidinga iholidi
I-India Tour Operators Bajabulele Ukubuya Kwamazwe Ngamazwe...
Ukuthuthukiswa Kwemithi Emisha Yezimo Zezinzwa
Izimoto Zezempi zikagesi ziyeza ngokuzayo
I-Russia ihlose 'izizwe ezingenabungane' nge-visa entsha ...
Lapho Abavakashi Bakhokha Amanani Aphakeme Kakhulu Ngezinsuku Ezinelanga
Imakethe Yezingxenye Zamafutha Obisi 2022 | Okuthrendayo kwakamuva...
Uhambo lomgwaqo olulinganiselwe kakhulu nolweqile emhlabeni
Hlangana Nebhodi Eliphezulu Le-PATA
I-Rwanda ayisadingi ukuhlolwa kwe-PCR kwamanye amazwe...
Ukwanda Kwesifo Sohlangothi, Umdlavuza, kanye Nezifo Zenhliziyo
Amazwe aphezulu ayi-10 wabahambi abakhuthele
ISouthwest Airlines ibophezele u-$2 billion ekutshaleni imali...
Uhambo lokungcebeleka lubuyile kubagibeli beQatar Airways
Ukufinyelela Okusha Eplathifomu Yokuqapha Umdlavuza
I-Engine Control Unit (ECU) Market : Value Chain...